अनुहार हँसिला मनमा कृष्णलीला – बाह्रथरी कुरा
It’s True- Men’s One Track Mind
हामी नेपाली १ नम्बरका ढोंगी छौं । मोही माग्ने तर ढुँग्रो लुकाउनु नै हाम्रो मौलिकता हो। साप्ताहिक भन्ने बेफ्वाँकको पत्रिका २५ रुप्पे हालेर किन्ने पनि त्यै १६ नं पेजको यौन जिज्ञासा पढ्नैको लागि हो। मन्दिरतिर जाँदा कर्के नजरले टुँडालतिर हेरेर मुख लेप्र्याउँछौ तर कसैले त्यसको बारेमा सोधेमा पुरा ‘भोला’ बन्छौं। यौनको बारेमा खुलेर कुरा गरौं भन्ने विज्ञापन बजाउन सरकारले बर्षेनी करोडौं रुपैया खर्च गर्छ तर कसैले यो कुरामा मुख उप्कायो भने केटा बोका कहलाउँछ भने केटी/महिला बाख्री वा बाइफाले। लाज पचेको, शरम हराएको जस्ता अनेकानेक आरोप लाग्छन्। कस्तो दोहोरो मापदण्ड है ?
कसले भन्या हो त था भएन तर Food, Sex र Rage लाई मनोवैज्ञानिकहरुले Basic Instincts को रुपमा राखेका छन्। भन्नुको मतलब के भने सृष्टि यी तीन कुराकै वरिपरि घुम्छ। उहि हाम्रो पूर्विय दर्शनमा ब्रम्हा, बिष्णु , महेश्वर भने जस्तै। प्रकृतिका कतिपय नियमलाई मानिसले चुनौति दिए जस्तै यौनको बिषयमा पनि मानवजातिले अरु प्राणीको निम्ति प्रकृतिले तय गरेको नियम तोडेको छ। यो चराचर जगतमा चाहे त्यो amoeba, paramecium होस्, जस्ता सुक्ष्म जिवाणु हुन् कि उन्यु र सल्लो जस्ता फुल नलाग्ने वनस्पति हुन वा बगैंचामा फक्रने फूल हुन् वा सर्प, माछा, भँगेरा, राँगा, हात्ती (धुर्वे) देखि ह्वेल नै किन नहोस् ! सबैको जीवनको एउटै उद्देश्य छ। DNA को रुपमा रहेको आफ्नो जैविक सुचना आगामी पुस्तामा पुस्तान्तर गर्नु । सबै प्राणीमा सबै मौसम, परिस्थिति वा याममा यी कुरा सम्भव हुन्नन्। त्यसैले त स्याउ जेठमा फुल लागेर असोजमा फल्छ, आँप चैतमा फुलेर असारमा फल्छ। बाख्रा प्राय: माघ-फागुनमा ब्याउँछन् भने गाई भैंसी साउन भदौमा। तर हेर्नुस् त मान्छेको चाला ! बाह्रै महिना, ३६५ नै दिन, २४ सै घन्टा, प्रत्येक सेकेन्ड-सेकेन्ड, प्रत्येक घडी-पला संसारमा कोही न कोही यो प्रक्रियामा संलग्न भैरहेका हुन्छन् । अरु प्राणीले यौनलाई सन्तान उत्पादनको लागि मात्र प्रयोग गरे भने मान्छेले यसलाई रमाइलो र सन्तुष्टिको लागि पनि प्रयोग गर्न जान्यो ।त्यसैले त मानवजातिलाई अरु कुनै माहोल मिल्न पर्दैन, बस एक जना पार्टनर र अडिने ठाउँ भए पुग्छ। अझ अचेल त पार्क, सार्बजनिक स्थल र हुँदा हुँदा ‘डान्सिङ कार’ का समेत किस्सा सुन्न पाइन्छ।
कथनी र करनीमा फरक
करनीको गलत अर्थ लाइसक्नुभो होला है ? यी यस्तो त छ हाम्रो दिमाग अनि हामी नै आदर्शका ठूला ठूला गर्छुम्। यसलाई अर्को अर्थमा बुझ्दा मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भनेर बुझे पनि हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने बाहिर बाहिर साधू, भित्र भित्र चालू। देखाउने दाँत अर्कै चपाउने दाँत अर्कै। सबका सब मौकाको पर्खाइमा हुन्छन् तर खुलेर भन्न पनि सक्दैनन्, दबाउन पनि सक्दैनन्। सार्वजनिक ठाउँमा महा भलादमी देखिएका मान्छे कहीं कतै केही संकेत देखेमा दोहोरो अर्थ लाग्ने कुरा गरेर संकेत बुझ्न खोज्छन्। पत्रिकामा कसैले हजुरले कुनै केटी देख्नु भो भने के हेर्नुन्छ भनेर सोध्यो भने कसैले आँखा वा कसैले ओठ भनेर सरिफ देखिन खोज्छन् तर हाम्ले नजान्या हो र कसले के हेर्छ भनेर ? पुरुषहरुले महिलाको बक्षस्थल वा नितम्ब हेर्नु पुर्णतया सामान्य हो । माथि चर्चा गरे जस्तै सबै प्राणीले आफ्नो पुस्ता कायम राख्न खोज्छ अनि महिलालाई देख्दा उसको ध्यान स्तन (भोलि आफ्नो बच्चालाई पर्याप्त दुध उत्पादन गरेर खुवाउन सक्ने) र नितम्ब (पर्याप्त तौल भएको र पुर्ण विकास भएको बच्चा पाउन सक्ने ) कुरालाई नियाल्नु कुनै पाप होइन । यस्तै पोथी प्राणलीले भालेबाट खोज्ने भनेको सुरक्षा हो भने कुनै केटा देख्दा केटीले उसको बलिष्ट पाखुरा र चौडा छाती नियाल्नुलाई डार्बिनकै विकासक्रमको सिद्धान्त अनुरुप छ। हैन त ?
मुखमा रामराम बगलीमा छुरा
महापुरुषको संगतमा भैरव अर्यालले भनेका छन् – जब कालले पासो हाल्दै ल्याउँछ अनि पहिले सालीका आशक्तहरु कालीका भक्त हुन्छन्, पहिले खन्तीराजमा बदनामी कमाएकाहरु पछि सन्त महाराज भइ रामनामी जप्न थाल्छन्। हो, हाम्रो समाज यस्तै ढोंगीहरुले भरिएको छ। बाहिर सोझो, गौप्राणी पनि भित्रभित्रै यौनपिपासु हुन्छ। त्यसैले त कहलिएका योगी सन्यासी , बाबा, फादरहरु बिभिन्न यौन सक्यान्डलमा परिरहेका हुन्छन् । थेसिसका गाइड हुन् वा प्रोफेसनल मेन्टर; पीडितहरुबाट समाजका बिभिन्न तहतप्काका मान्छेहरुको असलियतको बारेमा पत्याउनै नसकिने व्यवहारहरु सुनिराखिन्छन्। भेट्दा भलादमी भएर साखुल्ले पल्टिनेहरु नै भित्र भित्र कुरा काटिरहेका हुन्छन् र हाँसेर बोलेकोमै ल मेरो काम बन्छ भनेर दंग पर्छन्।
भर्चुअल संसारको रमाइलो
छक्कापन्जा फिल्ममा एउटा डाइलगको आशय छ – सबै सेटिङ फेसबुकबाट भैसकेको हुन्छ, बाँकि काम डेटिङमा हुन्छ । हुन पनि हो, सामाजिक संजालको व्यापकताले अचेल निकै सजिलो भाको छ ‘कुरो’ मिलाउन । सम्झिनुस् त ति दिन, जति बेला आँट गरेर लभ लेटर लेख्नु पर्थ्यो । मोबाइल थिएनन्, बल्लबल्ल घरको ल्यान्डलाइन पाएर बुथमा फोन गर्दा पनि बाउ आमाले उठाउदा केहि बोल्दै नबोलि गरिने ‘डेडकल’ ! अचेल बडो सजिलो छ । मन परेको मान्छेलाई फेसबुकमा खोज्यो, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठायो, हल्का हरियो घाँस हाल्यो, कुरो मिले पछि भाइबरको नाम माग्यो, अनि त च्याट हुँदै सेक्रेट च्याट अनि …… !! मन परेको मान्छे देख्दा घाँटीमा गाँठो पर्नेहरु च्याटमा बहादुरीका साथ फ्लर्ट गर्छन् । यो कर्ममा महिला पुरुष दुबै उत्तिकै सक्रियताका साथ संलग्न रहने हाम्रो अनुसन्धान ब्यूरोले पत्ता लाएको छ। घरको नल/परालबाट दिक्क भएर हरियो घाँस खोज्दै सामाजिक संजालमा बरालिने डिंगाको बिगबिगी छ अचेल। कुरो मिलुन्जेल सबै ठिकै हुन्छ, तर रिटिक्क कुरो बिग्रिने बित्तिकै स्कृनसट लिक गरेर हुर्मत काड्ने प्रबृत्तिले गर्दा यसमा थप चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।
नारी पुरुष बराबरी
माथि वर्णन गरिएका बुँदाहरु मुलत: पुरुषहरुकालागि भनेर दाबी गर्नु लैंगिक विभेद ठहरिनेछ। फ्लर्टिङ् होस् या च्याटिङ्, सेटिङ होस् या सेक्स्टिङ्, एक हातले ताली बज्दैन। भलै महिलाको तुलनामा पुरुष दिमागमा अलि बढी यौनले डेरा जमाएको होस्। तर पुरुषको तुलनामा महिलाको यौन चाहना बढी हुन्छ भनेर त पटकपटक अनुसन्धाताहरुले पत्ता लगाएकै तथ्य हो। नारीहरु यसमानेमा पनि साहसिक हुन् कि उनीहरुले सित्तिमित्ति आफ्नो चाहना व्यक्त गर्दैनन्, दबाएरै राख्छन्। तर विश्वासिलो र भरोसायोग्य साथी भेटे उनीहरु पनि पुरुषभन्दा पछि हुन्छन् भन्ने हाम्रो टीम मान्दैन।
This entry was posted in बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज and tagged ढोंग, बिपरित लिङ्ग आकर्षण, यौन, शोच, समाज. Bookmark the permalink.
One thought on “अनुहार हँसिला मनमा कृष्णलीला”